March, 28-2015 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh oo ku sugan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar oo uu uga qeyb-galayo shir madaxeedka wadamada Jaamacadda Carabka ee halkaasi ka furmay, ayaa furitaanka shirka ka hor la kulmay madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweyneyaasha dalalka Maser, Jabuuti, xubno ka socday hey’adaha Midowga Afrika iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Banki Moon.
Madaxweynaha oo la kulmay dhiggiisa Masar Abdel Fattah el Sisi iyo mas’uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Masar ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal, iyadoo sidoo kale Madaxweynuhu kulanka uu la qaatay dhigiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu ahaa mid ay kaga wada hadleen xaaladda dalka iyo dadaalka ay dowladda ugu jirto gaarsiinta dalka hiigsiga cusub ee sanadka 2016-ka.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Banki Moon ayaa waxa ay ka arrinsadeen sidii Qaramada Midoobay ay u xoojin lahayd taageerada ay siineyso Soomaaliya.
Shir madaxeedka Jaamacadda Carabta ee sannadkan ayaa ajendaha ugu weyn ee laga hadlayo waxa uu yahay dagaalka ka taagan Yemen, dhibaatooyinka ka jira qaar ka mid ah waddamada Carabta iyo dagaalka caalamiga ee ka dhanka ah argagixisada.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa dalka Turkiga.